Otu esi enweta jelii eze, ihe nzuzo nke ndi beekeepers - Ịchịkọta jelii eze - 2019
Jelị jelii bụ ngwaahịa kachasị mma n'ịnụ aṅụ. Ngwọta dị iche iche na ọgwụgwọ na-edozi ahụ, usoro mgbagwoju anya nke mmịpụta mere ka ọnụahịa ahịa dị elu maka ngwaahịa a. Ịmepụta ụdị mmiri ara ehi dị na ya bụ ọrụ siri ike, ma ọ dị ezigbo njọ (ọ bụghị maka mmepụta ụlọ ọrụ, mana banyere inye onwe gị na ezinụlọ gị ngwaahịa bara uru). Dịka o si pụta, onye na-elekọta beekeeper ga-enwe ike ịmalite jelii eze ọbụna n'ụlọ.
Ị ma? Ihe dị iche iche nke jelii eze na-enye ya ohere igbochi uto nke ụmụ nje na nje ndị na-emerụ ahụ, a na-eji ya eme ihe maka ọgwụgwọ na ịchọ mma.
Iwu nchedo mgbe ị na-arụ ọrụ
Ebumnuche nke ịkpa aṅụ, ịzụta mkpụrụ ndụ eze nwanyị
Kedu esi enweta jelii eze na ihe ị chọrọ maka ya
Beekeepers nzuzo, esi enweta karịa eze jelii
Ihe ị chọrọ na otu esi esi azụ ndị aṅụ
Nri nri na-esi nri
Kedu ka jelii eze si egosi, ọdịdị nke usoro ahụ
Aha jelly bee (a na-akpọ ya ma ọ bụ nke okike) dịka jelii, nwere agba ọcha, nwere uto mara ya na uto uto, ụda dị iche, ma nweta ya n'ụzọ nkịtị. Ndị na-arụ ọrụ aṅụ na-emepụta mmiri ara (ọ bụghị okenye karịa 6 ruo 15 ụbọchị) site n'enyemaka nke glands (mandibular na pharyngeal). Ihe a na-emepụta na-enye nwa ara na nri na-edozi ahụ ma na-etinye aṅụ na nne mmanya mmanya (200 ruo 400 mg).
Ihe mejupụtara jelii nke eze na-agabiga na ya na-eri nri nke akụkụ nke ndị ọrụ aṅụ ọtụtụ narị ugboro (ndụ anụ ọrụ 2-4 ọnwa, akpanwa - ruo afọ isii).
Teknụzụ nke inweta jelii eze na-agụnye ndị na-aṅụ beekeepers na-eji njirimara ndị dị ndụ nke aṅụ - na enweghi akpanwa, iji mee ka sel ndị eze nwanyị na-arụpụta jelii eze. Otu ezinụlọ nwere ike dina site na 9 ruo 100 queen cell n'otu oge (dabere na ụdị ma ọ bụ agbụrụ nke aṅụ na ọnọdụ). O kwere omume ka ndị ọrụ na-arụ ọrụ na-arụsi ọrụ ike na-arụpụta jelii eze ma ọ bụrụ na ewepụrụ akpanwa ma wepụta larvae n'ime ezinụlọ maka inye nri akpanwa ọhụrụ.
Azịza nye ajụjụ nke esi enweta mmanụ akwa jelii si aṅụ ga-abụ nkwenye iji hụ na ụfọdụ edozi ọcha na ịdị ọcha. Nke mbụ, ị ga-echekwa sel nwa ọdụm ma ọ bụ ahọpụtara na akpa ikuku n'ime friji (+ 3 Celsius) ruo mgbe ha ga-ewepụ ha na iji ya ọzọ.
Ọ dị mkpa! N'ụlọ, nhọrọ kachasị mma ga-abụ ịchekwa jelii eze na friji na n'ime nkwakọ ngwaahịa ya - na-ewepụghị ya mmanya mmanya. Ndụ ndụ nke sel nwanyi - otu afọ.
Ọ bụrụ na ị na-ewepụ mmiri ara ehi si na mmanya mmanya, ọ ga-efunahụ ọrụ ya niile n'ime awa abụọ, ya mere, ị ga-achọ ịma otú ị ga-esi chịkọta jelii eze.
Maka nbudata ihe dị ọcha site na sel nwanyi, a chọrọ ya:
ọnụnọ ụlọ dị iche iche (ụlọ ime nnyocha) bụ ebe a na-arụ ọrụ nkwụsị ahụ, ọ naghị ewepụ ìhè anyanwụ na-enwu gbaa, ọnọdụ okpomọkụ dị elu (+ 25 ... + 27 Celsius) na elu iru mmiri;
nnweta ngwá ọrụ pụrụ iche na friji;
tupu ịmalite ọrụ na ngwaọrụ - hichaa aka gị aka (ma ọ bụ disinfect site n'aka ndị ọzọ);
ngwaọrụ na containers maka nchekwa nke ngwaahịa iji sterilaiz. A ghaghị iji tankị ma ọ bụ aluminom mee tankị. Plexiglas na plastic bụ contraindicated;
ya na ihe eji eme ihe n'ile ya na uwe mgbochi 4 na ply gauze bandeeji.
Ọ dị mkpa! Ọ bụ ihe amamihe dị na ya izere ịkpọtụrụ jelii eze na ikuku na ìhè anyanwụ.
Oge kachasị mma iji nweta jelii eze bụ mmalite nke oge okpomọkụ (iri ngo n'etiti, ọtụtụ ubi, ọtụtụ ndị na-eto eto). Iji nweta ụda jelị ndị ọzọ, ịkwesịrị ịhọrọ ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụlọnga eze nwanyị.
E nwere ọtụtụ ụzọ omenala nke ịmepụta ụbụrụ eze nwanyị:
"mgbanwe dị jụụ" (ntakịrị mkpụrụ ndụ eze nwanyị);
(na enwere ọtụtụ ụlọnga eze, ma enwere ihe ize ndụ na aṅụ ga-efe efe);
"ụmụ mgbei" nke ezinụlọ (ọtụtụ ndị nne eze).
Nhọrọ nke atọ maka ịnweta jelii eze bụ ihe ka mma. N'ịchụpụ ndị eze, otu ụbọchị larvae (ruo 60) nwere ike kụrụ n'ime ezinụlọ maka inye nri. Ụbọchị atọ mgbe e mesịrị, usoro nchịkọta nke mmiri ara ehi.
Usoro ndị a na-ejikarị eme ihe bụ:
Miller (ebe ọ bụ n'afọ 1912). Ejiri okpukpu anọ nke mmanụ aṅụ na-adabere na etiti (adịghị eru 5 cm ruo na ala ala), tinye n'etiti okpokoro abụọ nke brood. Aṅụ na-amịta gịchichinu, na akpanwa na-etinye ụda ahụ. E wepụrụ okpokoro osisi, tinye ya na ezinụlọ dị ike, nke na-adịghị edozi ahụ. Anụ na-amalite ịdọkpụrụ ụdọ eze nwanyị. Mgbe ụbọchị atọ gasịrị, ị nwere ike ịnakọta jelii eze ma tinye oghere ọhụrụ.
Alley (nke e bipụtara na mbido 1882): gbutuo n'ime ibe honeycombs nke nwere ụbọchị anọ, belata ya na mma ma ọkara ma gbasaa mkpụrụ ndụ ahụ, na-etinye ya n'ahụ. A na-eji akpụkpọ anụ mee ihe ndị ahụ. N'ụlọ kasị sie ike, a na-ewere akpanwa na ụtụtụ ma na-egbutu ya na mgbede. Anụ na-amalite ịmaliteghachi mkpụrụ ndụ eze nwanyị;
usoro oganihu ma jiri ya mee ihe - nyefe nke larvae n'ite tank: ọ ka mma idobe ọkụ na wax dị ọcha na mmiri bat (okpomọkụ + 70 Celsius). Iji mee nke a, ịchọrọ ederede nke osisi na dayameta nke 8 ruo 10 cm. Tupu oge (ị nwere ike itinye ya na friji maka ọkara awa), kpoo diski ahụ, tinye ya na mmiri mmiri mmiri ugboro ugboro (ala ga-adịwanye oke), wee kpoo ya na, na-agagharị, kewapụ ya.
Ihe ọzọ ga-eme bụ ịnyefe (ịgba ọgwụ mgbochi) nke larvae na pan ahụ na spatula (ọrụ ahụ dị ezigbo mkpa ma sie ike - ọ dị mkpa ka ọ ghara imebi nwa ahuhu). Mgbe ụbọchị atọ ị ga-ewepụ sel ndị eze nwanyị na-ekpughe ọkwa ọhụụ;
Usoro nke Dzhenter: a na-eji ọgwụ honeycombs eme ihe, na nhọpụta nke ngwaọrụ na-eme na-enweghị nnyefe nke larvae. A na-ewepụ njedebe ala ike plastic na nwa ahuhu ma tinye ya na etiti na ekwo Ekwo (na-enye gị ohere ime n'enweghị ohere). Onyinye sitere na ezinụlọ ọ bụla (onye nkụzi) bụ 7-8 g nke mmiri ara ehi kwa ụbọchị.
Ị ma? N'afọ ndị 1980, onye na-azụ anụ bụ Karl Genter mere nchọpụta nke mere ka ọtụtụ nde ndị na-aṅụ aṅụ na ụwa na-emepụta jelii eze n'ebughị ibufe ha. A chọpụtara na nchọpụta a bụ nke anọ kachasị dị na nlekota (mgbe ekpuchi ekpuchi, ọkpọkọ mmanụ aṅụ na ngwaọrụ maka imepụta honeycombs).
A na - ejide jelii jelị na iko ma ọ bụ mkpanaka plastik (enwere ike wepụ ya ozugbo, enwere ike ịnakọta maka ụbọchị 6-7 mgbe nchekwa n'ime friji - jelii eze agaghị ata ahụhụ site na oyi). Na-ebughachite ihe niile larvae. A na-etinye ihe ndị dị n'ime refrjiraeto (ebe ọ nwere ike ịchekwa ya maka ihe karịrị awa 24) na akpa iko pụrụ iche nke iko iko ocha (nke kachasị mma na-esi n'ime ya).
Ị ma? N'Ijipt oge ochie, China, na Rom, a na-akpọ jelii eze dị ka ihe na-enye ndụ.
A na-ejikwa mmanụ aṅụ (1: 100), vodka (1:20) mee ihe iji chekwaa. Ma ọgwụgwọ na-anọgide na-njọ. N'ụlọ, ọ bụ nnọọ ihe siri ike iji mgbasa ozi na nkụ n'okpuru agụụ.
Ntinye nke mmiri ara ehi na-achọ nchịkọta ahịa:
akpụkpọ ụkwụ, ọkpụkpụ na mma - maka trimming;
iko plastik iko, nfuli, syringes - iji wepụ ihe ndị sitere na nne mmanya;
akwa nkwakọ ngwaahịa pụrụ iche;
guzo maka idozi honeycombs n'otu n'akuku.
Ọ dị mkpa! A pụghị iji iko iko mee ihe, ọ nwere ike imetụta ihe mejupụtara mmiri ara ehi.
Onye ọ bụla beekeeper nwere ya onwe ya na-abịakwute ya ntụrụndụ na nzuzo ya otú e si nweta ndị ọzọ eze jelii. Enweghị otu echiche dị ebe a. Nlekọta ụwa agaghị enye azịza na-enweghị isi banyere ajụjụ ọnụ nke aṅụ nwere ike imetụta jelii eze na ọnụ ọgụgụ ya, ọnụ ọgụgụ nke sel ndị eze nwanyị, wdg.
Na ị na-aṅụ aṅụ, a na-eme ka aṅụ na-aṅụ aṅụ n'oge ọdịda (mgbe a na-akwụsị akwụna), na oyi na n'oge opupu ihe ubi. A na-egbochi nri oge okpomọkụ n'ọtụtụ mba na-eweta mmanụ aṅụ. Enwere echiche na ọ bụrụ na onye na-anụ aṅụ na-achọ inweta jelii eze, mgbe ahụ, onye nkụzi ezinụlọ ga-eri shuga sirop kwa ụbọchị (0.5 l ọ bụla). Dịka ya ma ọ bụ - ị kpebie.
Ọtụtụ ndị na-aṅụ aṅụ nabatara na ụdị nri zuru ezu bụ shuga sirop. Enwere otutu ntụziaka (yana esemokwu - nke mmiri ga - eji (dị nro ma ọ bụ ike), ma ọ bụ ịgbakwunye mmanya ma ọ bụ).
Ntụziaka zuru ụwa ọnụ maka nri:
sirop: otu akụkụ nke mmiri - akụkụ abụọ nke shuga (maka oké, ma ọ bụrụ na vice versa - mmiri mmiri, otu akụkụ - ọkara). Esi nri n'ime ite. Mmiri obụpde, gbanye ya na igbari sugar n'ime ya. Na-ejere aṅụ ndị nwere sirop na-ekpo ọkụ (20-30 Celsius C);
mmanụ aṅụ jupụtara - mmanụ aṅụ na-agbaze n'ime mmiri (1 akụkụ nke mmiri na akụkụ 10 nke mmanụ aṅụ - ezigbo njupụta). A ghaghị iji mmanụ aṅụ eme ihe nanị site n'aka ezinụlọ ndị nwere ahụike;
Ngwakọta elu protein na - 400-500 g mmanụ aṅụ, 1 n'arọ nke pollen, 3.5 n'arọ nke powdered sugar. Ikwanye n'ime achịcha na cellophane na oghere tinye na etiti;
protin protein (Gaydak ngwakọta, soyapin, protein Bulgarian, wdg);
ngwakọta - pollen (igwo ya na blender), sirop shuga (10 l, 1: 1), nkwadebe "Pchelodar" (20 g).
Ọ dị mkpa! Ngwunye edozi edo edo edoghi edozi adighi mma maka nri ndi ozo.
Ọtụtụ ndị ọkachamara ka na-atụ aro ka ha jiri nri ndị ọzọ na-enye aka - mmanụ aṅụ, pollen na shuga sirop (65% shuga) na mmiri sie. Nke a bụ ọkọlọtọ a nabatara na nchịkọta anụ aṅụ nke ụwa.
Esi eji aka ha mee griin ha si na karama plastic
Ezigbo oke rabbit: Foc pygmy rabbit: peculiarities nke na-edebe n'ụlọ
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ịnakọta jelii eze, esi enweta ngwaahịa ahụ na apiary